मोन्टगोमेरीको त्यो बस- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
रंगभेदविरोधी आन्दोलनले जन्माएकी नागरिक–नायक हुन् रोजा पार्क्स । १९१३ को फेब्रुअरी ४ मा जन्मेकी रोजाको स्मृतिमा फेब्रुअरी महिनालाई ‘ब्ल्याक हिस्ट्री मन्थ’ का रूपमा मनाइन्छ । ‘मदर अफ फ्रिडम’ उपाधिले सम्मानित रोजा एक अनिवार्य पाठशाला हुन्, सबैले पढ्नुपर्ने ।
फाल्गुन ३, २०७६ सरिता तिवारी
डिपार्टमेन्टल स्टोरको दिनभरको जागिर सकेपछि घर फर्कँदै थिइन् उनी । सधैंझैं मोन्टगोमेरी–नगर बसमा उक्लिइन् । ड्राइभरको सिटसँगै रहेको पैसा तिर्ने मेसिनमा सिक्का खसालेर भाडा तिरिन् र बसको आधाउधी भाग जहाँ ‘कलर्ड’ लेखेको चिह्न राखिएको थियो, त्योभन्दा ठीक पछिल्लो सिटमा बसिन् ।
त्यतिबेला मोन्टगोमेरी नगर प्रशासनको नियम र प्रचलित अमेरिकी कानुनअनुसार, मान्छेका छालाको रङका आधारमा हरेक सार्वजनिक ठाउँहरू विभाजित थिए । सार्वजनिक धारा, शौचालय, अस्पतालका क्यु आदिदेखि बसका सिटसमेत ‘ह्वाइट’ र ‘कलर्ड’ भनी छुट्याइएका हुन्थे । गोराहरू जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थिए भने ‘कलर्ड’ भनिने कालो छाला भएका नागरिकहरू अक्सर सार्वजनिक अपमानको सिकार भैरहन्थे ।
तीनओटा बिसौनी कटेपछि एउटा सिनेमाहलअगाडिको स्टेसनमा बस रोकियो ।
बसमा केही गोराहरू चढे तर उनीहरू बस्न छुट्याइएका अघिल्लो आधा भागका सिट सबै भरिएका थिए । गोराहरू उभिइरहेको र ‘कलर्ड’ भनिएकाहरू बसिरहेको दृश्य गोरो छाला भएको ड्राइभरका लागि सह्य भएन । तिनलाई बसाउन ड्राइभरले ‘कलर्ड’ लेखिएको बोर्ड सारेर उनी बसेको सिटपछिल्तिर पुर्‍याइदियो र सिटमा बसिरहेका चार जनालाई उठ्न भन्यो । अरू तीन जना चुपचाप उठेर उभिए तर उनी उठ्न मानिनन् । बस ड्राइभरले तुरुन्तै प्रहरी बोलायो । उनलाई कानुन मिचेको आरोपमा उत्तिखेरै पक्राउ गरियो ।
कहानी त्यहीँदेखि थालिन्छ ।
रोजा पार्क्स ! अमेरिकाको नागरिक आन्दोलनकी ‘हिरो’ ! रंगभेदविरोधी प्रतिरोधकी सशक्त प्रतीक ।
मोन्टगोमेरीको त्यो बसभित्र १९५५ को डिसेम्बर १ मा जे भयो, त्यो इतिहास रेकर्ड गर्ने दिन साबित भयो । बसमा सवार रोजा पार्क्सले गोरा बस ड्राइभरको अपमानको डटेर प्रतिकार गर्नु र रोजाविरुद्ध कानुन अवज्ञाको मुद्दा लाग्नु नागरिक प्रतिकारका लागि विस्फोटक घटना बन्यो । दास प्रथा उन्मूलन (१८६५) र नागरिक अधिकार ऐन (१८६६) घोषणा भएको झन्डै सय वर्ष बित्न लागेको थियो । तर, कालो छाला हुने मान्छेमाथि गरिने घृणा र हिंसामा तात्त्विक अन्तर अनुभव हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि ‘बराबरी तर फरक’ ढाँचाको गोरा प्रभुत्वकै कानुनको अभ्यासमा कालो वर्णका मानिसहरूको चेतना जति गहिरोसँग थिलथिलो थियो त्यो अब आगो भएर, आँधी भएर कुनै न कुनै कारण बाहिर आउने अवस्था थियो । मोन्टगोमेरीको त्यो बसभित्रको अवज्ञा एउटा निर्णायक विद्रोहको कारण भैदियो ।
रोजा जमानतमा छुटिन्, दस डलर जरिवाना र चार डलर कोर्ट फी तिरेर ।
तर, उनलाई पक्राउ गरेलगत्तै सुरु भएको आन्दोलनले थामिने नाम लिएन । कानुनका कागजमा दासमोचन भए पनि ब्यवहारमा श्वेत आधिपत्यको क्रूर हलाहल पिएर बाँचेका मान्छेहरू बारुदजस्ता बने । आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो तर त्यसको मोहोरी यस्तरी मडारियो, सार्वजनिक यातायातलगायत कुनै पनि ठाउँमा छालाको रङका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि मात्रै त्यो शान्त भयो ।
त्यसबीचको ३८१ दिनसम्म प्रतिरोधस्वरूप काला समुदायका मानिसहरूले मन्टगोमेरीका कुनै पनि नगर बस चढेनन् । काममा निस्कँदा पैदलै हिँडे या भैपरी आउँदा ट्याक्सीको उपयोग गरे । यो आन्दोलन ‘मोन्टगोमेरी बस बहिष्कार’ का नामले चर्चित छ, जसको नेतृत्व मार्टिन लुथर किङ (जुनियर) ले गरेका थिए । यसलाई रंगभेदी पृथकताको कानुनविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो र सफल आन्दोलन मानिन्छ ।
आन्दोलन चलिरहँदा अफ्रिकी मूलका अमेरिकीले अविवेकी, हिंस्रक गोराहरूबाट झनै सास्ती पाए । सहरको ठूलो जनसंख्याले बस बहिष्कार गरेपछि मोन्टगोमेरीका आधा बढी नगर बसहरू ग्यारेजमा थन्किने अवस्था आयो । व्यवसायीहरूले ठूलो मात्रामा वित्तीय क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । यसबाट क्रुद्ध गोराहरू भौतिक हिंसामा उत्रिन थाले । कालाहरूको सम्मानका लागि नागरिक अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मार्टिन लुथर किङ (जुनियर) र एडवर्ड निक्सनका घरमा बम फ्याँकियो । काला समुदायले सञ्चालन गरेका चर्चहरू जलाइए । तिनले चलाएका नगर ट्याक्सीका बिमा खारेज गरिए । कैयौं काला मानिसहरू विभिन्न निहुँमा थुनामा परे ।
रोजालाई लागेको कानुन अवहेलनाको मुद्दा प्रारम्भिक अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्मै पुग्यो । तल्लो अदालतले नै जातीय पृथकताका सबै कानुनहरूलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरे पनि नगरपालिका त्यसलाई मान्न तयार भएन । आखिरमा १९५६ को नोभेम्बर १३ मा सर्वोच्चले तल्लो अदालतको फैसलाकै समर्थन गर्दै सार्वजनिक यातायातमा हुने विभेदलाई संविधानविपरीत घोषणा गरिदियो ।
यो मुद्दाको परिणामले रंगभेदी आन्दोलनलाई एउटा तार्किक नतिजा दिनेवाला त थियो तर रोजाको जीवन अब ब्यक्तिगत मात्रै रहेन । त्यो आन्दोलनबाट चुकाउनुपरेको सार्वजनिक मूल्यले रोजालाई अकल्पनीय दुःख र संघर्षको कुण्डमा धकेलिदियो । उनको छँदाखाँदाको जागिर चैट् मात्रै भएन मोन्टगोमेरी सहरमा बस्न–खानै नसक्ने गरी धम्की र त्रासको सामना गर्नुपर्‍यो । उनका श्रीमान्ले समेत जागिरबाट हात धुनुपर्‍यो ।
‘पब्लिक हिरोइजम’ को मूल्यमा तिर्नुपरेको व्यक्तिगत तनाब कतिसम्म पीडादायी भयो भने उनी जन्मेको, बाल्यकालदेखि बस्दै आएको अलाबामा राज्यको मोन्टगोमेरी छोडेर सपरिवार मिचिगनको डेट्रोइटमा बसाईं नै सरिन् । त्यहाँ फेरि उनको जागिरे जीवन सुरु त भयो तर उनको सार्वजनिक व्यक्तित्वका कारण त्यहाँको बसाइ पनि कम बोझिलो भएन । दैनिक गुजाराको जिन्दगी संकटमा पर्‍यो तर आफूले गरेको अवज्ञाकै कारण चुलिएको प्रतिरोध र त्यसले दिएको नतिजाले उनलाई निराश हुन, लत्रिन दिएन । नागरिक अधिकारका बाँकी संघर्षहरूमा अहर्निश लड्दै रोजा ९२ वर्षसम्म बाँचिन् । ‘मेडल अफ फ्रिडम’ सहित दर्जनौं पुरस्कार र सयौं सम्मान कार्यक्रममार्फत अमेरिकी समाजले उनलाई जीवित छँदै ठूलो कृतज्ञता प्रकट गर्‍यो । अमेरिकी नागरिक आन्दोलनकी पूववर्ती बुलन्द क्रान्तिकारी ह्यारियट टबम्यानसँगै रोजा ‘मदर अफ फ्रिडम’ उपाधिले समेत सम्मानित भइन् ।
उनले रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा बिताएका क्षणहरूलाई बुनेर १९९२ मा ‘माई स्टोरी’ नामक प्रेरणादायी आत्मकथा लेखेकी छन् । उनको अर्को संस्मरणसंग्रह पनि प्रकाशित छ , ‘क्वाइट स्ट्रेन्थ’ । उनीमाथि थुप्रै किताब, जीवनी लेखिएका छन् र ती पाठ्यक्रममा समेत राखिएका छन् । उनको जीवनगाथामा अनेक गीत गाइएका छन्, सिनेमा बनेका छन् । अनगिन्ती भिडियो र डकुमेन्ट्री, बालबालिकाका लागि समेत उपयोगी एनिमेटेड फिल्म बनाइएका छन् । उनीसँग जोडिएका स्मृति संकलन गरेर संग्रहालय निर्माण गरिएको छ । पार्क र स्मारक बनाइएका छन् । सडकहरू नामकरण गरिएका छन् ।
२००५ को अक्टोबर २४ मा उनको निधन भयो । मिचिगन राज्यले पचासौं हजारको संख्यामा जम्मा भएका प्रशंसकलाई साक्षी राखेर राष्ट्रिय सलामीसहित उनको अन्त्येष्टि सम्पन्न गर्‍यो । साधारण जिन्दगी, साधारण दैनिकीको एउटा घटनाले नयाँ मोड दिएको उनको जीवन अधिकारसचेत, हक्की र निरन्तर प्रतिरोधी मानिसको उदाहरण हो । उनलाई स्मरण गर्दै ओजस्वी लेखक/अधिकारकर्मी माया एन्जेलोले भनेकी छन्, ‘रोजा पार्क्स अप्रत्याशित तर महान आन्दोलनकी सूत्रधार थिइन् । उनी त्यसैका लागि जन्मेकी थिइन् सायद । उनको त्यो दिनको प्रतिरोधका कारण हामीले फरक देश ,फरक संसार पाएका छौं ।’
रोजा पार्क्सबिना योजना अचानकसँग इतिहास निर्माणको निर्णायक बन्न पुगिन् । एक साँझको एउटा अस्वीकार, एउटा ‘नो’, एउटा हठले उनको जिन्दगीलाई अद्भुत मोडतर्फ नडोर्‍याइदिएको भए उनी एक आम कामकाजी महिलाका रूपमै बाँच्थिन् होला । गुमनाम भएरै बितिजान्थिन् होला । यो अनुमानको मात्रै कुरा हो । हो, ४२ वर्षे उमेरसम्म उनी केवल एउटा नाम थिइन् । तर, त्यो नामको आत्माभित्र प्रतिकारको बारुद हुर्कंदो थियो । मोन्टगोमेरीको त्यो बस, त्यो घटना सलाईको काँटी भएर आयो ।त्यसपछि उनको नाम, नाम मात्रै रहेन । अधिकार आन्दोलनको शानदार बिम्ब भयो ।
बिर्सनु हुँदैन, मानिसमा प्रतिरोधको चेतना यत्तिकै र सजिलैसँग आउँदैन । उनीभित्र बाल्यकालदेखि नै रंगभेदविरोधी हठ र अस्वीकारको आँधी थियो, जुन कालान्तरमा एउटा विशाल आन्दोलनको बीउ बन्न पुग्यो ।
१९१३ को फेब्रुअरी ४ मा जन्मेकी रोजा लुइस म्याक्लेका (बिबाहपछि पार्क्स) पूर्वज कुनै बेला दास थिए । हृदयको अतल गहिराइसम्म पुगेर डामेको दासत्वविरुद्ध कहिले अरुसँग र कहिले आफैँसँग लड्दै तिनी हुर्किइन् । सानी छँदा सधैंजसो बिरामी भैरहने हुनाले रोजा खिनाउरी फुच्ची थिइन् । तिनलाई जो कोही गोरा केटाकेटीले सजिलै घचेट्थे, लडाइदिन्थे र खिसिट्युरी गरेर भाग्थे । फुच्ची, लिखुरी भए पनि उनी त्यसरी आफूलाई घचेट्नेविरुद्ध प्रतिकार गर्न, बदला लिइहाल्न चाहन्थिन् र गर्थिन् पनि । त्यसो गर्दा कहिलेकाहीं गोरा केटाकेटीका बाबुआमाको समेत गाली खान्थिन् तर यो कुराले उनलाई झन्झन् प्रतिबद्ध र ज्याद्रो बनाइदिन्थ्यो ।
बा जेम्स म्याक्ले र आमा लियोनाको सम्बन्धविच्छेद हुँदा उनी जम्मा दुई वर्षकी थिइन् । सानो भाइ र उनलाई लिएर आमा मामाघर बस्न आइन् । अलाबामालगायत अमेरिकाका प्रायः सबै राज्यमा पूर्वदासका परिवारहरूलाई छुट्टै कोलोनीमा बस्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । उनको मामाघर पनि ‘कलर्ड’ कोलोनीमै थियो । मावली हजुरबा समानताका लागि छाती फुकाएर लड्ने हक्की मानिस थिए । हजुरबा र हजुरामाको अपार माया र पारिवारिक शिक्षा पाएर हुर्कने संयोगले उनलाई रंगभेद र दासप्रथाको क्रूर परम्परा बुझ्ने अवसर दियो । बेलाबेलामा उनको घर अगाडिको बाटो हुँदै अतिवादी गोराहरूको समूह मार्च गर्दै आउँथ्यो । ‘ट्रिपल के’ (कु क्लुक्स क्लान) भनिने त्यो समूहको मुख्य निसाना निग्रो र आदिवासी अमेरिकी हुन्थे । घृणा, हिंसा र द्वेषले भरिएका ती अति–पन्थी हुल्डबाजहरूको मार्च आउँदा रोजाका हजुरबा जहिल्यै घरको गेटमा छाती तानेर उभिएका हुन्थे र साथमा हुन्थ्यो बन्दुक । यस्तो दृश्यले रोजालाई सानै उमेरदेखि नै हक्की र निर्भयी बन्ने चेतना दिएको थियो ।
१६१९ मा एउटा डच पानीजहाजले बोकेर ल्याएका २० जना अफ्रिकीको कथाबाट थालिएको अमेरिकाको दास प्रथालाई १८६५ मा अमेरिकी संविधानको १३ औं संशोधनले औपचारिक रूपमा विराम लगाइदिएको त थियो तर विभेदकारी कानुनहरूको दबदबा कायमै थियो । काला र गोरा बच्चाहरू पढ्ने स्कुल छुट्टै थिए । गोरा विद्यार्थीका लागि बस उपलब्ध गराइन्थ्यो तर कालो छाला भएका नानीहरू हिँडेरै मिलौं टाढाको स्कुल पुग्नुपर्थ्यो । यो विभेद झेल्दै माध्यमिक शिक्षासम्म पुगेकी रोजाको दिमाग बाल्यकालदेखि नै अनेकौं प्रश्न र प्रतिरोधले भरिएको थियो ।
सार्वजनिक सुविधा लिने ठाउँमा जहाँतहीँ झुन्ड्याइएका ‘हृवाइट’ र ‘कलर्ड’ लेखिएका बोर्ड देख्दा रङभेदको भाषाले भयंकर अल्मलिन्थिन् उनी । एउटा वार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘सानी छँदा सार्वजनिक धारामा अलगअलग सेतो र रंगीन पानी खस्ने होला भनेर म घण्टौं कुरेर धाराको पानी हेर्थें तर पानीको रङ त एउटै हुँदोरहेछ !’
१९३२ मा उनले बिहे गरिन् रेमन्ड पार्कसँग । अत्यन्तै उदार र मायालु रेमन्डले रोजालाई उच्च शिक्षाका लागि मात्रै प्रेरित गरेनन् आफू सम्मिलित नागरिक अधिकार आन्दोलन ‘एनएएसीपी’ सँग समेत जोडे । त्यही आन्दोलन, जसमा पछि मार्टिन लुथर किङ (जुनियर) पनि जोडिए । १९०९ मा स्थापित ‘एनएएसीपी’ को मुख्य उद्देश्य थियो राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक समानताको हकका लागि लड्नु । रोजा यो संगठनको क्रियाशील कार्यकर्ता बनिन् ।
मोन्टगोमेरी नगर–बसभित्र उनले गरेको प्रतिवादकै कारण कालाहरूको मुक्ति आन्दोलनले निर्णायक गति लिएको जति साँचो हो, उनको त्यो प्रतिकार एकाएक र आकस्मिक मात्रै पनि थिएन भन्ने पनि त्यत्तिकै साँचो हो । यो घटनाले इतिहासको निर्माण गर्न ठूलो नाम, ठूलो इरादा बोकेको, धेरै पढालेखा मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्छ । हामीभित्र जीवित प्रश्नको अस्तित्व छ भने, हामीभित्र अन्यायको प्रतिकार गर्ने हठ छ भने, आइपर्दा जस्तोसुकै हन्डर खान सक्छु भन्ने दह्रो संकल्प छ भने त्यस्तो जोसुकै पनि व्यक्ति इतिहास बदल्नेशानदार कारण बन्न सक्छ । यो कुरा रोजा पार्क्सको नकार र प्रतिरोधले बताउँछ । प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १४:०२
फाल्गुन ३, २०७६ अर्जुन ढकाल
एभरेस्टको देश भने पनि धेरै नेपालीले ‘एभरेस्ट’ नजिकबाट देख्ने अवसर पाएका हुँदैनन् । यसका लागि सबैभन्दा रोचक त आठ हजारभन्दा अग्ला टन्नै हिमाल बोकेर बसेको महालंगुर रेन्ज हेर्न जानु नै हो, त्यो पनि सोलुखुम्बु, जहाँ अहिले आठ–दस घण्टाको यात्रामा सजिलै पुग्न सकिन्छ । सोलुखुम्बुको पातले, दोलखाको कालिञ्चोक वा सैलुङ जाँदा यो सम्भव थियो । हिमाली खर्कमा चौंरी र याकका गोठ पनि हेर्न पाइने । योजनामा पारिवारिक साथी जितेन्द्रजी र दीपाजी पनि जोडिनुभयो । हामी सकेसम्म अंग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो दिनसम्म घर फर्कन चाहन्थ्यौं । न्यु इयर इभमा होटलहरूमा हुने अत्यासलाग्दो भीडभाड र अव्यवस्थालाई छल्नु थियो ।
घमाइलो बिहान चालकसहित सात जनाको टोलीले काठमाडौं छाड्यो । शनिबारको बिहानै भए पनि काठमाडौंको प्रदूषण उस्तै थियो, उकुसमुकुस । हामी कोटेश्वरबाट पूर्व लाग्यौं । इँटाभट्टाको धूवाँले ढाकिएको भक्तपुर उठेकै थिएन । तर, धुलिखेलमा बिहानैदेखि चहलपहल देखियो ।
यात्रा भनेको हेर्नु र घुम्नु मात्रै होइन खानु र चाख्नु पनि हो । त्यसैले पहिलो छाक नै, काभ्रेको हसेरा अर्गानिक फार्म, पात्लेखेतमा खाने विचार गरियो । यसका सञ्चालक मित्र गोविन्दजीलाई खबर गर्‍यौं । टाढा जानु छ, त्यसैले पुग्नेबित्तिकै खाएर हिँड्न पाइयोस् भनेर खबर गरेको त उहाँहरू ‘फ्रेस’ नै खुवाउने भनेर नपकाई बस्नुभएछ । गणेश, लाङटाङ, जुगल र गौरीशंकर रेन्जका हिमाल हेर्दै हामीले बिहानी भोजन गर्‍यौं ।
यो सडक लामो समय लगाएर जापान सरकारले बनाइदिएको हो । पूर्वी नेपाल जाने सबैभन्दा छोटो र दोस्रो मूल सडक हुनुका कारण यसले नसोचेको सवारी चाप धान्नुपरिरहेको छ । सडक आफूमात्रै बन्दो रहेनछ, यसले नसोचेको ठाउँमा सहर र बस्तीको विकास गर्ने रहेछ । घुर्मी र खुर्कोट यस क्षेत्रका आशालाग्दा विकास हुँदै गएका नयाँ सहर हुन् ।
काभ्रेबाट झरेर सुनकोसीको किनारैकिनार पूर्व लागेर झन्डै दुई सय किलोमिटरको यात्रापछि जयरामघाटबाट ओखलढुंगा उकालियौं । साह्रै सुन्दर व्याख्या गरिएको कविता स्कुलमै पढेकाले होला, ओखलढुंगाको नामसँग अलि बढी अपेक्षा थियो । अझ एक रात त्यहीँ बस्ने पो हो कि भन्ने थियो । तर, हाम्रा चालकले त्यहाँको असुविधा सुनाउँदै नबसौं भन्न थाले ।
बाटोमा छिटपुट देखिने सार्वजनिक यातायातबाहेक खासै गाडीको चाप थिएन । राजमार्गमा सबैभन्दा बढी देखिनेचाहिँ स्कोरपियो, जिप र टिपर । रफ्तारमा हुइँकिइरहेका टिपरले संकेत दिन्थे, जलविद्युत् परियोजनार ढुंगागिट्टी–बालुवाको फस्टाउँदो व्यापार । यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, अहिले देशैभरि बालुवाको व्यापार फस्टाएको छ ।
करिब तीन घण्टा घुमाउरो बाटो चढ्दै हामी साँझमा ओखलढुंगाबाट उकालो लाग्यौं । जति माथि लाग्थ्यौं, आकाश नजिकिन्थ्यो । पश्चिम आकाशमा हँसिया आकारको चन्द्रमा–दृश्य लोभलाग्दो थियो । आकाशभरि हजारौं तारा, सल्लाको जंगल, छेउमै थुप्रिएको हिउँ । हामी पातले पुग्यौं । पातले, जहाँबाट संसारका ६ वटा सबैभन्दा अग्ला हिमालमध्ये ४ वटा (एभरेस्ट, कञ्चनजंघा, ल्होत्से, मकालु) नजिकैबाट देख्न सकिन्छ । चोयु, सुन्दरी, आमादब्लम, पुमोरी, दूधकुण्ड, थामसेर्कु पनि देखिन्छन् ।
हामी पुग्दा अँध्यारो भइसकेको थियो । हिमाल देख्ने त कुरा भएन । होटल पुग्दा सिरसिर चिसो हावा चलेको थियो, एभरेस्टबाट आएजस्तो । अँगेनोको छेउमा बसेर आगो ताप्दै लेक नलागोस् भनेर लसुन र टिमुरको सुप, लोकल सागको तरकारी, मुलाको अचारसँगै खाना खायौं ।
कुरैकुरामा होटलकी आमाको उमेर सोध्यौं । दिउँसो बाटोबाट फोन गरेर होटल बुक गर्दा मायालु पाराले ‘बिस्तारै आऊ है बाबुछोरा’ भन्ने आमा त जम्मा ४३ वर्षकी रे ! देख्दा झन्डै ६ दशककी लाग्ने ‘आमा’ र आमालाई सहयोग गरिरहेका युवा आमाको छोरा होलान् भन्ने ठानेको त श्रीमान् पो रहेछन् !सुत्ने कोठा भने बाहिर सिमेन्टको गारो र भित्र प्लाइउड ठोकेर बनाइएको थियो । काठ र सिसाका झ्याल टमक्क थिएनन्, चिसो हावा छिरिरहेको थियो ।बिहानै हिमाल देखियो । होटलका मालिकले एभरेस्ट हेर्न आफ्नो किचनमा बोलाए । अँगेनोछेउ कुर्सी राख्दै भने, ‘यो ढोकाको चरबाट जुन हिमाल देखिन्छ, हो त्यही हो है एभरेस्ट ।’घाम उदाउँदै गर्दा एभरेस्ट सबैभन्दा पहिला रातो देखिन थाल्यो । उनले अर्को उपाय पनि सुल्झाए, बिहान ९/१० बजेतिर जुन हिमालबाट धूवाँ उड्छ, त्यही हो एभरेस्ट । नभन्दै त्यस्तै देखियो । बिहानभरि हिउँ खेल्दै हामी हिमालको काखमा रमायौं ।
हाम्रो उद्देश्य तीर्थाटन गर्नु थिएन । हिमाल र पहाडि बाटोमा गाडी चलाउँदै प्रकृति र संस्कृतिसँग रम्नु थियो । तर, साँझ हलेसी पुगेपछि होटलका म्यानेजरले हलेसी महादेवको साँझको आरती हेर्न सुझाए । सामान्यतया नेपाली मन्दिरभन्दा धेरै सफा र व्यवस्थित हलेसी साँझको आरतीमा अनौठो दृश्य देखियो । भजनमा केही तिब्बती मूलका आनी, केही पहाडी मूलका मानिस र केही मधेसी मूलका महिला सँगसँगै नाचिरहेका थिए । कस्तो सांस्कृतिक र धार्मिक समावेशिता !
हलेसीलाई हिन्दु धर्मावलम्बीले पूर्वको पशुपति, बौद्व धर्मावलम्बीहरूले दोस्रो लुम्बिनी अर्थात् मराफिक गुफा र किरात धर्मावलम्बीले आदिम भूमि ठान्छन् । नेपाल एकीकरण हुनुअघि यस भूमिमा किराती राजा ‘होलैसुङ’ ले शासन गरेको इतिहास छ । उनैको नाम अपभ्रंस भएर हलेसी भएको हो भनिन्छ । त्यस्तै, बौद्धमार्गीहरूले महान् गुरु पद्मसम्भवले वर्षौं तपस्या गरी बुद्धत्व प्राप्त गरेको पवित्र भूमिको रूपमा सम्मान गर्छन् ।
अबको हाम्रो यात्रा खुलेको महालंगुर रेन्ज हेर्दै दोलखातिरको थियो । सुनकोसीको किनारैकिनार मन्थलीतिर लाग्यौं । यो बाटोभरि दायाँपट्टि सुनकोसी नदी बग्छ, घुर्मीबाटै । सुनकोसी तिव्बतको जांगजाङ्बो हिमतालबाट उत्पत्ति भएर नेपाल पस्छ । यसलाई बाह्रबिसे बजारमाथि भोटेकोसी र तल सुनकोसी भनिन्छ । ठूलो जलाधार क्षेत्र भएको यो नदीको माथि केही जोखिमपूर्ण हिमताल पनि रहेका छन् ।
रामेछापमा सुनकोसीको पारिपट्टि झन्डै उजाड देखिने पालतो बुट्यान भएका पहाड छन् । यी पहाडमा खासै बस्ती पनि छैन र जीवन कष्टकर छ । वास्तवमा यी पहाडहरूले सताब्दियौंदेखि पानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । नेपालका वर्षा कम हुने भूभागमध्ये यो पनि एउटा हो । बर्खामा आउने पानी बोकेको बादल अग्लो महाभारत लेकमा ठोकिएर सीधै गौरीशंकर हिमालतिर पुग्छ । त्यसैले यहाँको ठूलो भूभागमा अन्यत्रको जस्तो ठूलो र नियमित वर्षा हुँदैन । अर्थात् वृष्टि छायामा पर्छ, मुस्ताङजस्तै ।
जिल्ला सदरमुकाम भए पनि संघीय संरचना र स्थानीय निकायमा अधिकार गएर होला सदरमुकामहरू अब केन्द्र कम र बस्ती बढी हुन थालेछन् ।तामाकोसीको किनारैकिनारै उत्तर लागेर चरिकोटतिर उकालो लाग्यौं । त्यो दिनको बास बस्ने ठाउँको टुंगो लागेको थिएन । जाडो र समय हेरेर चरिकोट बस्ने वा कुरी गाउँ, छलफल गर्दै थियौं । गाडीचालक अनुभवी र त्यो ठाँउमा परिचित रहेछन् । उनले कुरी गाउँ नै जाने सल्लाह दिए । फोन गरेर होटल पनि बुक गरिदिए । हामी साँझको सुनौलो गौरीशंकर हिमाल हेर्दै उकालो लाग्यौं ।
झन्डै साँझ ७ बजे कालिञ्चोकको कुरी गाउँ पुगियो । हिउँले ढपक्कै ढाकेको कुरी नयाँ वर्ष स्वागत गर्न झिलिमिली थियो । कुनै युरोपियन सहरजस्तो । यहाँका अधिकाशं होटल निर्माणाधीन छन् । गत साल मात्रै सुरु भएको केबुलकारपछि बढेको पर्यटक चापले यस बर्षभित्रै दर्जनौं होटल बन्न थालेका छन् । सामुदायिक वनसँग लिज लिएर बनाएका होटलका कालीगढ भने सबै इलामतिरबाट आएका रहेछन् ।
काठमाडौंबाट करिब डेढ सय किलोमिटर टाढा रहेको यो सुन्दर ठाउँ हिउँदमा युवायुवतीका लागि हिउँ खेल्ने र गर्मीमा सबै रमाउन मिल्ने स्टेसन हुन सक्छ । तर, बाटो र होटलको सुविधाले धेरैलाई फेरि जाऊँजस्तो बनाउँदैन । झट्ट सम्झिँदा अव्यवस्थित ठमेलजस्तै लाग्छ ।बाहिर रङ र डिजाइन राम्रो भए पनि कोठामा सुविधा भने थोरै थिए । राम्रो भनिएको होटलमा पनि भित्ताबाट हावा पस्ने । पानी जमेको बाथरुम, भिजेका कार्पेट र सिसा झरेका झ्याल । पैसाअनुसारको सुविधाजनक थिएन । जति सुन्दर ठाउँ भए पनि, होटलको असुविधाले बसाइ लम्ब्याउन मन लाग्दो रहेनछ ।
बिहानै लाग्ने न्यानो घामले न्यानो बढ्दै गयो । पाँच मिनेटजतिको केबुलकारबाट जब ३८४२ मिटरमाथिको चुचुरोमा पुगिन्छ, त्यहाँबाट मनोरम दृश्य वर्णनै गर्ने नसकिने । चुचुरामै कालिञ्चोकको मन्दिर पनि छ ।
मन्दिरको गेटैमा प्लास्टिकको झोलामा पूजा सामग्री बिक्री हुन्छ, त्यसको १० मिटर पर मन्दिरमा प्लास्टिक निषेध भनेर समितिको मान्छेले रोक्छ र विकल्पमा २० रुपैयाँमा प्लास्टिककै टोकरी भाडामा दिन्छ । धर्मको नाममा व्यापार र अव्यवस्थाले केही निराश बनाउँछ ।
कुरी गाउँ झरेपछि छोराछोरीहरूले फेरि हिउँ खेले । अब हामीले भेट्न बाँकी थियो— चौंरी र याक । सामुदायिक वनसँगको विवाद, चरन अभाव र यातायातको विस्तारले चौंरीपालन घटिरहेको छ । सोलुखुम्बुमा सोध्दा, अहिले चौंरी पाल्ने चलन घटेकोले खासै भेटिँदैनन्, भएका पनि जाडोले गर्दा तल खर्कतिर होलान् भनियो । यस्तै उत्तर आयो कालिञ्चोकमा पनि । अब फर्किने बेला चरिकोटमाथिको खर्कमा वा मुडेदेखि ठिक्क पारिको सैलुङ लेकमा पसेर चौंरी हेर्ने योजना बनायौँ ।
फर्किंदा, चरिकोटमाथिको खर्कमा ‘मिक्स’ चौंरी त भेटियो चर्दै गरेको तर बच्चाहरू निदाएकाले उठाउन मन लागेन । चौंरी गोठ र सैलुङ लेकको यात्रा अब अर्कोपटकलाई भन्दै नयाँ वर्ष स्वागत गर्न झन्डै मध्यरातमा घर आइपुगियो । यो रोमाञ्चक यात्रामा आँखाले एभरेस्ट चियाइयो । स्नोको अद्भूत स्पर्श गरियो । तर, याकको खोजी भने अधुरै रह्यो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १३:५२